I-United States Imali kwiMfazwe Yehlabathi I
Imbali kunye neNkcubeko Imbali yaseMerika
Uqoqosho lwe-US kwiMfazwe Yehlabathi I
Xa kwaqubuka imfazwe eYurophu ehlobo le-1914, ingxaki yokwesaba iqhutywe kummandla wezorhwebo waseMerika. Enkulu kakhulu ukwesaba ukusuleleka kwiimarike zaseYurophu ukuba iNew York Stock Exchange ivaliwe kwiinyanga ezingaphezu kweenyanga ezintathu, ukumiswa kokude kunabo bonke kwimbali yayo.
Ngelo xesha, amashishini angakubona inkulu enkulu imfazwe ingayifaka emigqeni yazo ephantsi.
Uqoqosho lwaxutywa ngokunyuka kwemali ngo-1914 kwaye imfazwe yavula ngokukhawuleza iimarike ezintsha zabenzi baseMelika. Ekugqibeleni, iMfazwe Yehlabathi I yanyusa iinyanga ezingama-44 zokukhula kwe-United States kwaye yomeleza amandla ayo kuqoqosho lwehlabathi.
IMfazwe Yehlabathi I yayiyimfazwe yokuqala yokuhlaziywa, efuna iimali ezininzi zokuxhobisa nokubonelela ngemikhosi emininzi kunye nokubonelela ngezixhobo zokulwa. Imfazwe yokudubula yayixhomekeke kwiingxelo-mlando ezazisithi "imfazwe yemveliso" eyayigcina umkhosi wemikhosi usebenza.
Ngethuba leminyaka yokuqala yesi-2 ½ yokulwa, i-US yayingumntu ongathathi hlangothi kwaye ubuqhetseba bezoqoqosho buvela ngokusuka kumazwe angaphandle. Inani elipheleleyo lemali yokuthumela amazwe e-United States landa ukusuka kwi-2.4 2.4 yezigidigidi ngo-1913 ukuya kwii-6.2 zeebhiliyoni ezi-6.2 ngonyaka we-1917. Uninzi lwawo lwaya kumandla amakhulu ahlangeneyo njengeBrithani, iFransi neRashiya, eyayikhupha i-cotton yase-Amerika, ingqolowa, ubhedu, i-rubber, imoto, oomatshini, ingqolowa, kunye neminye yeminye imveliso eluhlaza kunye neyayigqityiweyo.
Ngokwezifundo zango-1917, ukuthunyelwa kweensimbi, iimashishini kunye neemoto zenyuka ukusuka kwiiR4 480 kwizigidigidi ngo-1913 ukuya kwi-1.6 billion yezigidigidi ngo-1916; Ukuthengwa kwezinto ezivela ngaphandle kwenyuka ukusuka kwiiRandi ezili-190 ukuya kwii-510 yezigidi kwiixa ezifanayo. U-Gunpower uthengisa i $ 0.33 i-pound ngo-1914; ngo-1916, bekufike kwi $ 0.83 ngeepounds.
UMerika ujoyina iMfazwe
Ukungathathi hlangothi kwaphela xa iCongress yamemezela imfazwe eJamani ngo-Ephreli 4, 1917 kwaye i-US yaqalisa ukwandiswa ngokukhawuleza nokuhlanganiswa kwamadoda angaphezu kwezigidi ezi-3.
Ixesha elide lokungathathi hlangothi kwe-United States lenze uguqulelo olugqithiseleyo loqoqosho kwixesha lexesha lezemfazwe lula kunokuba lingaba nalo, "kubhala umbhali wezomnotho uHugh Rockoff. "Isityalo esinyani kunye nezixhobo zongezwa, kwaye ngenxa yokuba zongezwa ngokuphendula iimfuno ezivela kwamanye amazwe asele emfazweni, zongezwa ngokuchanekileyo kuloo macandelo apho ziya kufunwa xa i-US ingena empini."
Ekupheleni kowe-1918, iifemu zaseMelika zazivelise izigidigidi eziyi-3.5 zezibhamu, izigidi ezingama-20 zezixhobo zokulwa, izigidigidi ezingama-633 zezigidi zamatye ezingabikho. Ama-376 yezigidi zezigidi zamapompo aphezulu, i-11,000 yegesi enetyhefu kunye neenjini ezingama-21,000.
Umkhukula wemali kumacandelo okuvelisa ukusuka kwamanye amazwe nakwamanye amazwe kukhokelela ekunyuseni kwamkelekile kwabasebenzi baseMerika. Inqanaba lokungaqeshwa kwabasebenzi base-US liye lahla ukusuka ku-16.4% ngo-1914 ukuya ku-6.3% ngo-1916.
Oku kwehla ekungabikho kwemisebenzi kubonakaliswe ukunyuka kwemisebenzi ekhoyo, kodwa i-pool yezabasebenzi ehlayo. Ukufudukela kwamanye amazwe kuye kwaphuma kwi-1.2 yezigidi ngo-1914 ukuya ku-300 000 ngo-1916, kwaye kwaphuma kuma-140 000 ngo-1919.
Phantse izigidi ezi-1 zabesetyhini zaphela ekujoyina abasebenzi ukuba zihlawulele ukulahleka kwamadoda amaninzi.
Imirhumo yokukhiqiza yanda ngokuphawulekayo, iphindwe kabini kwi-11 engama-iveki ngo-1914 ukuya kwi-22 yezikolo ngeveki ngo-1919. Oku kukhulisa amandla okuthenga abathengi kunceda ekukhuthazeni uqoqosho lwesizwe kwimigangatho emva yemfazwe.
Iindleko ezipheleleyo zeenyanga ezili-19 zeMelika zokulwa zaba yi-$ 32 billion. U-Economist uHugh Rockoff uqikelele ukuba i-22% yanyuswa ngentlawulo kwiinkampani zenkampani kunye nabazuze umvuzo ophezulu, ama-20% akhuliswa ngokudalwa kwemali emitsha, kwaye i-58% yaphakanyiswa ngokuboleka ebantwini, ngokukodwa ngokuthengiswa "kweleko" Bond.
Urhulumente wenza i-olayini yokuqala yokulawulwa kwexabiso kunye nokusekwa kweBhodi ye-War Industries Board (i-WIB), ezama ukudala inkqubo ephambili yokuzaliseka kwezivumelwano zeburhulumenteni, ukubeka amaxabiso kunye neendlela zokusebenza ngokufanelekileyo, kwaye zabelwe izinto ezibonakalayo ezixhomekeke kwiimfuno.
Ukubandakanyeka kweMelika kwiMfazwe kwakumfutshane kangangokuba igalelo le-WIB lalinganiselwe, kodwa izifundo ezifunyenwe kule nkqubo ziza kuba nefuthe kwi-planning military.
Imfazwe iphelile ngomhla kaNovemba 11, 1918 kunye nokuhlaselwa kwezomnotho kweMelika ngokukhawuleza kwaphela. Iifayili zaqala ukuphazamisa imigangatho yokuvelisa ehlobo le-1918, ekhokelela ekulahlekelweni kwemisebenzi kunye namathuba ambalwa okubuyela kumajoni. Oku kwakhokelela ekunciphiseni kwemali emfutshane ngowe-1918-1919, ilandelwa yomeleleyo ngo-1920-21.
Kwixesha elide, iMfazwe Yehlabathi I yayinomnatha omninzi woqoqosho lwaseMerika. Akusekho i-United States isizwe esisezantsi kwinqanaba lehlabathi; kwakukho isizwe esinotyebi-mali esinokuguquka kumntu onetyala kumthengi wehlabathi. I-US ibonise ukuba iyakwazi ukulwa nemfazwe yemveliso kunye nezemali kunye nentsimi yamagosa amavolontiya anamhlanje. Zonke ezi zinto ziza kudlalwa ekuqaleni kwenkqubela yehlabathi elandelayo ngaphantsi kwekota yekota.
Uvavanye ulwazi lwakho lwephambi kweWWI.
Umlando weNkcazo yokuLawulwa kwamaKnee
Iimpawu zeNew England Colonies
Isizathu sokuba Sinamaxesha Exesha
Ngubani obolekileyo kwiSitembu sokuBala?
ULee noChark Timeline
Iimbali Nge-Jamestown Colony
I-Albany Plan yoManyano
Inkcenkceshi yaseCuban Missile ka-1962
Imbali yoMbane weKrisimesi
ZeZebulon Pike zeeNtshontsho zeeNtshontsho zeNtshona
I-Know-Nothing Party yachasana nokufudukela eMelika
Iblack eyed peas
Amaqiniso Ngobomi kunye nokuziphatha kwe-Perch Perch
Ngaba ezinye iiHindu zesiHindu zizukisa iMfazwe?
Isihlandlo soBukumkani basePersi
IQebhu yoLwazi lweZiko loKhuseleko
Yintoni IBhayibhile Eyithetha Ngayo Ngeemimoya?
Afrika baseMelika kwiSayensi
Isiqalo esingaqaliyo IsiNgesi - Le nto kunye neye-Iikopi zeeKlasi
I-University State University
Indlela yokwakha i-Skateboard Grind Rail
Ngaba Ikhuselekile Ekubuyiseleni Amanzi?
Iinkqubo zokuThengisa iNFL
Ziziphi iindawo eziMkhulu kunye neNcinane?
IiApile kunye neNyunja kuMnyaka omtsha wamaYuda
Indlela yokukhawuleza iRig neBallyhoo Bait Fish
I-Marymount University Admissions
Ukukhula koQoqosho kunye noMthetho wama-70
Izipho zokugqibela zeMbali zaBantu baseMandulo